Haintany sy hafanana tafahoatra: handrotsahana orana artifisialy any Andekaleka | NewsMada
Par Taratra sur 28/11/2020
Mahasahana sehatra maro ny hafanana tafahoatra sy ny tsy fisian’ny rano ary ny rotsak’orana, ankehitriny. Anisan’ny vahaolana ny fandrotsahana orana tsy voajanahary, hatao amin’ny herinandro ambony io, any Andekaleka, fototry ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina.
Mikaikaika ny rehetra amin’ny tsy fahampian’ny rano fisotro, ny rano manondraka lemaka hambolena vokatry ny hafanana tafahoatra, ny haintany ary ny tsy fisian’ny rotsak’orana manerana ny Nosy. Mano­loana izany, nilaza ny tale jeneralin’ny famantarana ny toetr’andro ao amin’ny minisitera (MTTM), Rtoa Raholi­jao Nirivololona, omaly, fa handrotsahana orana tsy voajanahary (artifisialy) any An­dekaleka amin’ny talata 1 desambra ho avy izao. Anto­ny, mba hiavian’ny orana, hanampy ny loharano mampihodina ny milina mamokatra herinaratra any an-toerana, mahatonga ny delestazy. Mila herinaratra koa ny milina manadio rano eny Mandro­seza, sady manosika ny rano amin’ny famatsiana ny isan-tokantrano.
Nanamarika Rtoa tale je­neraly fa efa voavinavina mialoha, tamin’ny volana oktobra sy ny novambra teo, ny hi­sian’ny hafanana be, ny fiakaran’ny maripana manodidina ny maherin’ny +5°C miohatra amin’ny tokony ho izy. Mbola hitohy izany fiakaran’ny maripana izany, saingy mety ho feno kosa ny fepetra hirotsahan’ny orana manomboka amin’ny herinandro ambony, fiandohan’ny volana desambra. Hiainga any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy ny orana, ary hikisaka tsikelikely hahazo ny afovoan-tany sy ny mianavaratra. Araka izany, vinavinaina fa hirotsaka ny orana any Fianarantsoa, ma­nomboka amin’ny herinandro ambony io.
Ritra ny loharano
Saika tsy ampy ny rano fisotro an’ny Jirama, manerana ny tanàn-dehibe eto amin’ny Nosy. Antony, ritra ny loharano mamatsy ny tobin-drano ho an’ny mpanjifa. Any Antsiranana, nahatratra 22 ny loharano avy any amin’ny Montagne d’Ambre, mamatsy ny tampon-tanànan’Antsira­nana sy ny manodidina. Tsy misy afa-tsy roa sisa izany ankehitriny satria ringana ny ala ao amin’ity tendrombohitra ity. Ritra, toraka izany, koa ny tohodranon’Antarabiby, anisan’ny mamatsy rano ny tampon-tanànan’i Fianaran­tsoa, miampy ny loharanon’i Vatosola. Tsy lazaina intsony ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy ampy ny tosiky ny rano avy any amin’ny farihin’i Mandroseza.
Manampy ireo, tsy ampy ny rano manondraka ny lemaka, indrindra ny tanimbary. Fotoana iandrasana ny rano anefa izao, hikarakarana ny vary vakiambiaty. Manom­boka hamoa koa ny varialoha, nefa tsy misy ny rotsak’orana. Olana avokoa ireo mipaka any amin’ny toekarena sy ny so­sialim-bahoaka ankapobeny.